Madaxweyne Farmaajo awood ma u leeyahay shaqo ka joojinta Ra’iisal Wasaare Rooble? - Bulsho News
Lixda meelood ee aan qorraxdu ka dhicin in ka badan...
Rai'sul wasaare Rooble oo ka jawaabay qoraalkii ka soo baxay...
Madaxweyne Farmaajo awood ma u leeyahay shaqo ka joojinta Ra'iisal Wasaare Rooble?
Madaxweyne Farmaajo awood ma u leeyahay shaqo ka joojinta Ra’iisal Wasaare Rooble?
Xigashada Sawirka, VILL SOMALIA
Iyadoo war ka soo baxay goor sii horeysay Aqalka Madaxtooyada Soomaaliya lagu sheegay in madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku hakiyey awoodihii Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ,ayaa waxaa su’aali ka taagantahay oo dad badan is waydiinayaan madaxweynuhu ma leeyahay awood uu shaqada kaga hakiyo raysal wasaarihiisa.
Haddaba sharciyan awood madaxweynuhu ma u leeyahay ka hakinta raysal wasaaraha shaqadiisa?
“Qoraalkaan ugu dambeyay ee maanta uu soo saaray madaxweynaha Jamahuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo,qoraalkaas waxaa la dhihi karaa gebi ahaanba ma ahan qoraal xagga sharciga marka laga fiiriyo ku qotama qodobbo sharci ah”ayuu yiri Maxamed Xasan (Qaanuuni) oo ka mid ah sharci yaqaannada Soomaalida ah .
Laakiin warqadda ka soo baxaday madaxweynaha ee uu shaqada kaga hakiyay raysal wasaaraha wuxuu ku soo qaatay oo uu adeegsaday qodobbo dasuurka ku meel gaarka ah ka mid ah. Haddaba taasi miyaaney sax ahayn ayaa la waydiiyay sharci yaqaanka oo BBC-da u waramayay.
Isaga oo ka jawaabayay su’aashaas Sharci -yaqaan Qaanuuni ayaa waxaa uu sheegay in xafiisyada siyaasadda dalka marka laga eego dhanka sharciga aan wax shaqo joojin ah lagu smaeyn karin,gaar ahaanna xafiisyada madaxweynaha,raysal wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamanaka.
Wuxuu intaa ku daray in marnaba dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya aanu madaxweynaha awood u siineynin inuu shaqada ka hakiyo Ra’iisul Wasaaraha.
“Haddii aad fiiriso qodobka 90-aad ee Dastuurka Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya-na marnaba madaxweynaha awood uma siinayo inuu Ra’iisul Wasaaraha shaqadiisa hakiyo”ayuu yiri Maxamed Xasan (Qaanuuni).
Wuxuu rumeysanyahay Maxamed Xasan in xiligaan oo baarlamaankii wakhtigiisii dhamaaday isla markaana xukuumaddii xil-gaarsiinta ee shaqeynaysay ninkii hoggaaminayay shaqada laga joojiyay madaxweynaha oo ah astaanta Qaranka-na muddo xileedkiisii dhamaaday ay arrintaasi ka dhigantahay in dhamaan laamihii dowladda aaney shaqeyneynin “Waa wax aan sharciga iyo maskaxda furan aan maan-gal ku ahayn”
Saameynta go’aankaan yeellan karo.
Dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegaya in tallaabadaan maanta uu qaaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmajao iyo khilaafka sii siyaaddaya ay keeni karaan in dalku uu galo xaallad jaha-wareer ah.
Daahir Qoriyow Isaaq oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya, ayaa walaac ka muujiyay qallafsanaanta siyaasadeed ee dalka haatan ka jirta isaga oo sheegay in jaha wareerka xiligaan taagan uu abuuri karo in dalku dib ugu noqdo wakhtiyo adag oo la soo maray.
“Wakhtigii asakarta iyo milatarigu isku horfadhiyeen Xamar ee laga soo gudbay xaallad ka daran ayay dalka dib ugu celinaysaa is-haynta labada mas’uul ee dalka ugu sareeya”ayuu yiri Daahir Qoriyow.
Rajada dhaqangalka shaqo ka hakinta Rooble
In tallaabadaan ay dhaqan gasho ayaa dadka qaar u arkaan in ay tahay arrin adag marka la eego khilaafka taagan sida uu ku soo bilowday iyo halka xaalladda dalka ay hadda marayso. Marka la milicsado sida maalmihii la soo dhaafay ay labada mas’uul u dhex maquurteen khilaafkooda iyo waraaqihii iska soo daba dhacayay ee ka soo baxayay xafiisyadooda waxaa yar rajada laga qabo in arrintaan ay si fudud u hirgasho isla markaana ay sabab u noqto in laga gudbo khilaafka sii laba kacleynaya saameynta badana yeeshay ee32ww maalmahaan taagnaa.
“Waxaan filayaa waa uun mnidi mindi ku taagtii socotay waraaqdaan qor tan diid oo soo bilaabatay markii Fahad Yaasiin xilka laga qaaday iyo magacaabistii wasiirka,macquulna maaha in raysal wasaaraha sida uu dhaqmayana ay wax ka hirgalaan madaxweynaha sida uu dhaqmayana ay wax ka hirgalaan” ayuu yiri Daahir Qoriyow oo BBC-da u warramayay.
Daahir Qoriyow Isaaq ayaa sidoo kale qaba in khilaafkaan sii siyaadaya ee u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble uu mugdi sii galinayo rajadii laga qabay in dalka ay ka dhacdo doorasho ku dhacda jawi nabdoon taas oo shacabkana sida uu sheegay ku abuuraysa rajo xumo hoos u dhigaysa wixii ay filayeen oo ah in walx walba degganaan lagu garao. Intaa wuxuu raaciyay in is mari-waagaan madaxda sare ee dalka uu horseed u noqon karo in dalku dhibaato horleh wajaho.
Saameynta khilaafka ee doorashada
Falanqeeyaasha arrimaha Soomaaliya ayaa sheegaya inay muuqato in laga weecaday arrimihii doorashada isla markaana lagu mashquulay arrimo aan u oolin xafiisyada hardamaya ee madaxweynaha iyo raysal wasaaraha.
BBC-da ayaa wayiidisay Daahir Qoriyow Isaaq su’aal ku saabsaneyd warka ka soo baxay madaxweynaha ee ku aaddanaa shaqo ka hakinta raysal wasaaraha saameynta uu ku yeelan karo arrimaha doorashada ee dalka ka socda,mar uu ka jawaabayay su’aashaas ayaa waxaa uu sheegay.
“Waxaan u malaynayaa in geedi socodkii doorashada uu meel xun marayo inaysan hirgalin doonin ayay u dhowdahay haddii sidaan lagu socda oo khilafkaan samaeyn doono oo hadda doorashadii la iska hilmaamay”.
Guddiga Doorashooyinka Jubaland Oo Baaq U Diray Musharaxiinta...
Taageerayaasha Man United Oo Isku Raacay Xiddiga Ilaa...
“Tartanka waan isaga haray markii ay odayaashu iiga...
D/Hoose Ee Saylac Oo Shaacisay Mashaariic Horumarineed Oo...
Gudd. Cirro: Khilaaf siyaasadeedku waxa uu qeyb ka...
Biden aims to enlist allies in tackling climate,...
Laba Xiddig Oo Liverpool Ah Oo Seegay Tababarka...
“Miisaaniyadda lagu shaqaynayo 2022-ka waa 37 bilyan 80%...
Cristiano Ronaldo oo la sheegay inuu tababarka la...
Muqdisho: Dhalinyaro Ku Geeriyooday Xeebta Liido
Raila Odinga oo ololihiisa ku daray dib usoo...
Muqdisho: Ajaanib lagu helay in ay ka tirsan...